LOL အံ့သြစရာ 559795 တစ် ဦး ကအလင်းရောင်ဝတ်စားဆင်ယင်
အပြည့်အစုံဖော်ပြချက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော LOL OMG အရုပ်အပြာရောင်မျက်လုံးကြီးများနှင့်ပန်းရောင်ဆံပင်များရှိဆောင်းရာသီဒစ္စကိုသည်ဖက်ရှင်အကျီင်္ဖြစ်သည်။ အရုပ်တွင်လှပသောရှည်လျား။ လှပသောပန်းရောင်ဆံပင်၊ လှပသောမိတ်ကပ်နှင့်ကျောက်မျက်ရတနာကျောက်မျက်ရတနာများရှိသည်။ Crystal Star (အလှအပ၏အမည်ဖြစ်သည်) ငွေရောင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ၀ တ်ဆင်ထားသော puffy အင်္ကျီလက်များနှင့်ဘောင်းဘီရှည်များဝတ်ဆင်ထားသည်။ ကြီးမားသော fluffy စကတ်ထိပ်ကိုကျော်ပစ်ချခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်သလင်းသရဖူပါသောလှပသောခါးပတ်သည်ခါးပတ်ပေါ်တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောဖိနပ်ဖြစ်သည်။ အရုပ်အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ...
ဖော်ပြချက်အပြည့်အစုံလှပပြီးယဉ်ကျေးသော "Ballerina" သည် Mattel မှ Barbie စီးရီးမှအရုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံပြင်ဂိမ်းများကိုနှစ်သက်သောမိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ဘာဘီအရုပ်များကိုစုဆောင်းသူများအတွက်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဘဲလေးကသမားများကဲ့သို့ပင်အရုပ်သည်လှပသောစင်မြင့်အ ၀ တ်အစားများဝတ်ဆင်ထားသည်။ Barbie သည် tutu, corset နှင့် tiara ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်။ Tutu နှင့် tiara တို့ကိုဖယ်ရှား။ လိုချင်လျှင်အခြားအရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်တင်နိုင်သည်။ သူမမှာသူမအရုပ်ကိုလှပတဲ့ဆံပင်ပုံဖော်နိုင်ပြီးတောက်ပတဲ့ဆံပင်ရှိတယ်။ လက်နှင့်ခြေထောက်များ ...
MUSIC BOX ROBOTIME“ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကျွန်း ISLAND AM407
MUSIC BOX ROBOTIME“ VOCATIONAL ISLAND AM407 DESCRIPTION အပြည့်အစုံ Robotime ဂီတသေတ္တာ“ Vocational Island” AM407 သစ်သား 3D ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ၁၀ နှစ်ကျော်သောမည်သည့်အရွယ်မဆိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောသေတ္တာသည်ယောက်ျားလေးများ၊ မိန်းကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အလွန်ကောင်းသောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏လက်များဖြင့်စုစည်းခြင်းသည်မည်မျှကောင်းလိုက်လေခြင်း! အကွေ့အကောက်များသောယန္တရား၏အကူအညီဖြင့်သီချင်းများကိုသင်နားထောင်နိုင်သည်။ သေတ္တာကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါသည့်ကျွန်းငယ်တစ်ကျွန်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အပြည့်အဝဖော်ပြချက်ဆောက်လုပ်ရေး၏အကူအညီဖြင့်အဆိပ်မဟုတ်သောပလပ်စတစ်ဒြပ်စင် ၂၆ ခုပါ ၀ င်သောဆိသည်ဆလိုက်၊ ကြိတ်ခွဲစက်နှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသည့်အလွန့်အလွန်ကောင်းသောမြို့ဖြစ်သော Aquapark မြို့ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ အစုံ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်လွယ်ကူသောပွင့်လင်းမြင်သာသောအိတ်ထဲတွင်လက်ကိုင်များဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသဖြင့်ကလေးကသူနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရန်သို့မဟုတ်လည်ပတ်ရန်အလွယ်တကူယူနိုင်သည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေ၌တည်ဆောက်ထားသောပျော်စရာကောင်းသောဆောက်လုပ်ရေး၌ကလေးငယ်များသည်အရုပ်များနှင့်ကစားရန်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကူးထားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အသေးစားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပျံ Fidget ပင့်ကူကစားစရာ FlyNova ပျံသန်း Gyroscope Stress စိုးရိမ်စိတ်ကယ်ဆယ်ရေးကစားစရာများ
ပစ္စည်းမူရင်း: ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
ပုံစံများ - Fly-01
Item: YouTube ရောင်းအားအကောင်းဆုံး FlyNova Flying Fidget Spinner
ပစ္စည်း: အရည်အသွေးမြင့် PP
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစင်တာ I`m Toy5မှ ၁“ Sorter၊ တေးဂီတ၊ ပုံဆွဲခြင်း (ခဲ၊ ပလပ်စတစ်)၊ စွဲစေခြင်း”
ဝိသေသလက္ခဏာများကလေးကျားမ - ယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးအသက် - ၁ နှစ်မှ ၃ နှစ်အတွင်းပစ္စည်းများ - သစ်သားထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းသည်အသိအမှတ်ပြုထားပါသည် - ဟုတ်ပါသည်၊ အမှတ်တံဆိပ် - ကစားစရာထုတ်လုပ်သူ - ကျွန်ုပ်သည်ကစားစရာနိုင်ငံ - တရုတ်ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား -42 × 45 × 40 cm အလေးချိန် - ၄.၇ ကီလိုဂရမ်ထုပ်ပိုးအမျိုးအစား - ကတ်ထူပြား
ကလေးများ hypoallergenic Cat Rubin Fancy, ၂၃ နှစ်အတွက် sequins ပါသည့်အပျော့စားကစားစရာ
ကလေးငယ်များအတွက် hypoallergenic ကြွယ်ဝသောကစားစရာ Cat Rubin Fancy, ၂၃။ ကလေးများအတွက် sequins နှင့်အတူ antistress ဖြင့်ကစားနည်း Glitter unicorn ပုလဲဖန်စီ၊ ၂၃ စင်တီမီတာ sequins များနှင့်မျက်လုံးကြီးများပါ ၀ င်သည့်ဤအပျော့အရုပ်သည်သင့်ကလေးအတွက်အကြိုက်ဆုံးအပျော့စားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့။ နူးညံ့။ အလွန်ချစ်စရာကောင်း။ ၎င်းသည်ကလေးများနှင့်မိဘများအတွက်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်နူးညံ့ဆုံးခံစားမှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကစားစရာတွင်ထူးခြားသောပစ္စည်းတစ်ခုရှိသည် - အရောင်ပြောင်းပါ! သင်၏လက်ကို၎င်းနှင့်အသစ်သော plush အသစ်ကိုသာအပေါ်သို့ဆွဲတင်လိုက်ရုံပါပဲ။
တရုတ်မှရုရှားသို့ကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ခြင်း, တရုတ်နိုင်ငံမှအော်တိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, တရုတ်နိုင်ငံမှ AUTO နှင့်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း, AVIA, တရုတ်ကနေလေကြောင်းပို့ဆောင်, တရုတ်နိုင်ငံမှလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး,